१० प्रतिशत भेन्टिलेटर कोरोनाका जटिल बिरामीले भरिए – Saurahaonline.com
सौराहा अनलाइन | २०७८, ५ बैशाख आईतवार
काठमाडौँ : देशभर कोभिड–१९ का लागि छुट्याइएका भेन्टिलेटरमध्ये करिब १० प्रतिशत कोरोनाका जटिल बिरामीले भरिएका छन् । कोभिडकै लागि भनेर ४ सय ६१ वटा भेन्टिलेटर छुट्याइएका छन् । तीमध्ये शनिबारसम्म ४५ वटामा जटिल बिरामी उपचाररत छन् ।
‘कोभिड संक्रमणले आईसीयू र भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीको संख्या बढ्दो छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘राजधानीमै आईसीयू, भेन्टिलेटर पाउन गाह्रो भइसक्यो, बाँकेमा त यहाँभन्दा पनि बढी गाह्रो भएको अवस्था छ ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार गण्डकीमा समेत कोभिडको केस उकालो लाग्दै छ । गण्डकीमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ । विराटनगरमा पनि अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । राजधानीको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु र पाटन अस्पतालमा कोभिड बिरामीका लागि आईसीयू र भेन्टिलेटर भरिँदै गएका छन् । ‘हामीकहाँ भएका २१ वटा आईसीयू र १५ वटा भेन्टिलेटर नै प्याक छन्,’ पाटन अस्पतालका डा. आशिष श्रेष्ठले भने, ‘हाल अस्पतालमा जति कोभिड बिरामी छन्, सबै जटिल अवस्थाका छन् ।’